Otu n'ime nsogbu ndị m na-ahụkarị na nyocha bụ na ndị na-ere ahịa na-eche na ị na-ebuwanye ọtụtụ nha bụ ụzọ iji bulie nyiwe ha. Ọ bụ ezie na ọ dị mma ịnweta ọtụtụ puku mgbanwe iji kọọ maka ya, ịghọta nke ndị mgbanwe nwere mmetụta na azụmahịa gị siri ike karị. Ọbụna nghọta nke mgbanwe dị iche iche na-ajụ ajụjụ maka otu esi emegharị agịga ahụ. Ihe nyocha nyocha yiri ka ọ na-ewepụta ajụjụ karịa
BlitzMetrics na-enye dashboard na-elekọta mmadụ nke na-enyocha data gị n'ofe ọwa na ngwaahịa gị niile n'otu ebe. Enweghị mkpa ịchọ nyocha maka usoro ntanetị niile. Usoro a na-enye akuko banyere ndị ọkacha mmasị gị na ndị na-eso ụzọ gị iji nyere gị aka iwulite mmata aha, itinye aka na n'ikpeazụ - ntụgharị. Karịsịa, BlitzMetrics na-enyere ndị ahịa aka ịghọta mgbe na ihe ọdịnaya kachasị dị irè ka ị nwee ike idozi ozi gị dịka